Otu esi eme oriọna mmanu na oroma - Ikkaro
Inicio >> Nlekọta ụlọ >> Otu esi eme oriọna mmanụ oroma
Otu esi eme oriọna mmanụ oroma
Ihe a bu ihe enyi m mutara m n’oge di anya gara aga, ebe m nwere ike inwe oroma na obere mmanu nweta oriọna anyị na nkeji ole na ole.
Ọ bụ eziokwu na ọ naghị eme ka anyị nwee nghọta, mana ọ na-adị ka ọchọ mma n’abalị. Ọ bụrụ na ị nwere ihunanya nri abalị ma ọ bụrụ na ịchọrọ gosi mmasi n’oriri na nri ma obu nri nri n’etiti ndi enyi ma obu ezinulo.
Iji mee oriọna anyị, anyị ga-achọ naanị ihe ndị a. Oroma na obere mmanụ, ewerewo ụfọdụ n'ime ha ma jiri ya mee nri. Nke a bụ otu anyị si egweri ;-)
Ihe mbụ anyị ga - eme bụ wepu akpụkpọ si oroma na-ekewa ya n'ime 2 halves. Maka nke ahụ, anyị na-eji akara akara akara ma jiri mkpịsị aka na-ekewapụ, na vidiyo ọ dị mma karịa.
Akụkụ kachasị masị anyị bụ ọdụ, nke anyị ga-eji dị ka owu. Anyị ga-ewepụ akụkụ a nke ọma ka ọ ghara imebi ma tufue mmanụ mgbe e mesịrị.
Na nke a ị na-fọrọ emecha oriọna. Naanị anyị ga-agbanye mmanụ n'ime ime ka "wick" anyị tinye nke ọma na mmanụ.
Mana ị ga-ahụ ihe niile ka o doo anya na vidiyo. Ọ bụrụ na ị esoghị anyị, denye aha Achọrọ m ibido ikenye vidio kwa izu
Lee, ana m ahapụ ụfọdụ foto oroma. Ejiri dị ka kandụl, oriọna ma ọ bụ oriọna
Igwe ikuku na-enweghị ikuku ma ọ bụ nke na-enweghị oyi
Tabby. Mee ụgbọ ala DIY Open Source gị
9 kwuru na "Etu esi eme oriọna mmanụ na mmanụ mmanụ"
Abụọ 6, 2014 na 7:53 pm
Abụọ 12, 2014 na 2:45 pm
Machị 12, 2014 na 2:57 ụtụtụ
odikwa nma ma burukwa ihe ekere eke
Machị 15, 2014 na 10:13 pm
ummm, mana nke ahụ bụ tanjerịn, ọ bụghị oroma ummm
Mee 20, 2014 na 8:09 pm
Nice na isi nke ọgaranya citrus ga-enwerịrị
Julaị 1, 2014 na 6:53 pm
Ọ nwere ike mere na a tonip…?
August 3, 2014 na 11:50 pm
hello, ahụrụ m ha ezigbo oyi, ọ dị mfe iweta na mmemme ụlọ akwụkwọ. Mana achọrọ m ịma ma m nwere ike iji ụdị mkpụrụ osisi ọzọ. Daalụ.
August 5, 2014 na 10:49 pm
Ọfọn, n'ezie naanị ihe na-eme ka oroma dị mkpa bụ na anyị nwere ike iji ọdụ ahụ na-anọgide dị ka wick. Amaghị m ma e wezụga na citrus ị nwere mkpụrụ osisi ọ bụla nwere njirimara ndị a. Ọ bụrụ na ịnwale otu ma ọ rụọ ọrụ nke ọma, biko mee ka anyị mara.
August 8, 2015 na 12:50 am
Oroma dị mma adịghị emerụ ahụ ike